Ahụ ike - Bezzia | Bezzia
La salud Ọ bụ n'ezie mpaghara kachasị mkpa na ndụ yana n'ozuzu ya na ndị ọzọ metụtara ya dị ka ọdịmma, nhazi ma ọ bụ enweghị ọrịa. Ya mere, dị ka Organizationtù Ahụ Ike Worldwa, ọ na-ezo aka na ya dị ka ọnọdụ zuru ezu ọdịmma anụ ahụ, iche echiche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na Bezzia anyị na-arara ngalaba nke isiokwu a na n'ime ya, anyị na-emeso isiokwu ndị dị ka ọrịa, Atụmatụ iji dị mma ma ọ bụ felata. Site na isiokwu ndị a, anyị chọrọ ịnye ozi ka ndị mmadụ wee mara mkpa ọ dị ilekọta onwe ha anya, iri nri nke ọma ma ọ bụ imega ahụ, mana mesie ike mkpa ọ dị itinye ndụmọdụ ndị a n'ọrụ.
Anyị na-atụ anya na ebe a ị ga-ahụ mmụọ nsọ iji lekọta ahụike gị.
Usoro 4 iji bulie ùgwù onwe onye
por Nke Torres eme Awa 10 .
Ịhụ onwe onye n'anya kwesịrị ịbụ ịhụnanya mbụ onye ọ bụla. Hụ onwe gị n'anya bụ isi, ọ bụ ...
Mgbatị ahụ iji mee ka ahụ niile dị n'ụlọ
por Nke Torres eme Ụbọchị 2 .
Mgbanwe ndụ, ndị mmadụ na -emegharị maka ọnọdụ ọhụrụ wee na -achọ ụzọ ndị ọzọ iji gaa n'ihu ibi ndụ ...
Ntụ ọka Chickpea: Uru ya na nnukwu echiche iji ya
por Susana godoy eme Ụbọchị 2 .
Ị tinyela ntụ ọka chickpea n'ime nri gị? Eziokwu bụ na anyị na -achọkarị ụzọ ọzọ iji ...
Ịdị gịrịgịrị abụghị otu ihe na ahụ ike
por Nke Torres eme Ụbọchị 3 .
Mkpakọrịta na -enwekarị ahụ ike na nke a bụ ihe na -ezighi ezi ma nwee ike bute nnukwu nsogbu ...
Gịnị bụ premenstrual syndrome?
por Nke Torres eme Ụbọchị 5 .
Ọrịa premenstrual syndrome na -ezo aka n'ọtụtụ ihe mgbaàmà metụtara oge ịhụ nsọ. Àgwà na njimara nkịtị ...
por Nke Torres eme Ụbọchị 6 .
A bịa na nri na nri, ị nweghị ike ikwu na edere ihe niile. Maka, ọ dabara nke ọma, ụbọchị ọ bụla ha na -ewere ọnọdụ ...
por Susana godoy eme Ụbọchị 6 .
Taa karịa ọzụzụ n'onwe ya, anyị ga -ebugharị site na usoro mmega ahụ ma ọ bụ gbatị ruo ...
por Nke Torres eme 1 izu .
Inwe ezigbo ụzọ eriri afọ dị mkpa iji nwee ahụike. N'ihi na iwepụ nsị n'ahụ bụ ...
Otu esi ezere ọnya n'ụkwụ gị mgbe ị na -agba ọsọ
Mgbe ị na -agba ọsọ ọ ga -ekwe omume ịta mmerụ ahụ dị iche iche yana yabụ ọ dị ezigbo mkpa iji echiche kwadebe ahụ nke ọma ...
Ị ma na enwere ọtụtụ vitamin anyị na -ebi kwa ụbọchị. Ha niile nwere usoro uru nke ...
Ịhazi menu izu ụka bụ ụzọ kachasị mma iji chịkwaa ihe ị na -eri, ka i si eri ya na ụzọ i si ...
Otu esi eme ka oge gị daa ngwa ngwa
Mmiri ara nke magnesia
Best ọgwụ ojiji nke pepemint
Olee otú iji kpochapụ oke mgbu eze mgbu?
Ojiji nke Vicks Vaporub
Bọchị na-eme nri
Moosu, olee mgbe anyi kwesiri itu ujo?
Mara ọrụ nke vitamin niile
Nuklia, ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka
Magnesium carbonate a ebube maka ahu gi
Otu esi eme ezigbo mbelata ịhịa aka n'ahụ site na nkwụsị
Omume dị mfe iji zuru ike n'olu
Sequelae nke Bulimia na Anorexia
Gịnị bụ ụjọ ụjọ?